Mas’uuliyiin katirsan maamulka G/Banaadir oo booqday degmada Cadaado – Radio Muqdisho
Mas’uuliyiin katirsan maamulka G/Banaadir oo booqday degmada Cadaado
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda ee maamulka gobolka Banaadir iyo mas’uuliyiinta maamulka degmada Cadaado ayaa maanta kormeeray goobaha danta guud ee kuyaala magaalada Cadaado.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda maamulka gobolka Banaadir Maxamed Axmed Diiriye oo ay wehliyaan Gudoomiye ku xigeenka maamulka degmada Cadaado Nuur Yarow Xayle mas’uuliyiin kale ayaa waxaa meelihii ay kormeerka ku tageen ka mid ahaa, Isbitaalka degmada, garoonka kubadda cagta, xarunta degmada iyo suuqyada magaalada Qaarkood.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa u kuurgalayay xaalada nololeed ee bulshada deegaanka iyo horumarada ay sameeyeen, isagoo markii kormeerkiisu soo dhamaadana la hadlay warbaahinta Qaranka.
“Marka loo fiiriyo degmooyinka la mid ah xaalkeedu aadbuu u wanaagsanyahay, waxaa ka muuqda horumar balaaran oo la taaban karo, gobolka Banaadir waa caasimaddii Soomaaliyeed, sidaas darteed degmadan iyo degmooyinka kaleba waxaan leenahay calaaqaad ayuu yiri
“Isbitalka qaybihiisa kala duwan ayaan booqanay, baahidii ugu badneed ee uu naga codsaday inaan wax kala qabano agaasimaha waxaa ka mid ahayd in Leyrka saaladda qaliinku uusan ahayn kii loogu talagalay, iyo in la helo Keydka Dhiigga”.
Gudoomiye ku xigeenka dhinaca siyaasadda gobolka Banaadir ayaa qayb ka ahaa wafdi uu hogaaminayo wasiirka arrimaha gudaha iyo Fedeaalka xukuumadda Soomaaliya oo wali ku sugan magaalada Cadaado.
Wasiirka ganacsiga iyo warshadaha oo ka warbixiyay safaro uu ku tagey dhowr dal
Shir ku saabsan faa’iidada ceymisku u leeyahay bulshada oo maanta lagu qabtay Muqdisho
Shir ku saabsan faa'iidada ceymisku u leeyahay bulshada oo maanta lagu qabtay Muqdisho